Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay deegaano ka tirsan Bakool kala wareegtay shabaab (Dhegeyso) – Radio Daljir
Oktoobar 16, 2013 4:35 b 0
Xudur, October 16, 2013 – Ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee gobolka Bakool ayaa la wareegay deegaano hor leh oo ka tirsan kuwa hoos yimaada degmada Xudur, maamulka gobolka oo la hadlay idaacada Daljir ayaa sheegay in howlgalku ahaa mid qorshaysan.
Gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Macalin Axmed waxaa uu sheegay in howgalka lagu qabtay deegaano tuulooyin u badan oo ku dhow degmada Xudur, halkaas oo ay horay gacanta ugu hayeen ururka Al-shabaab oo aad u jooga gobolka.
Maxamed Macalin ayaa xusay sidoo kale in ay khasaare balaaran gaarsiiyeen kooxda Al-shabaab ee deeganadaas gacanta ku hayey, isagoo hadalkiisa sii wata ayuu xaqiijiyey in ay dileen saraakiil sar sare balse uusan xusin magacooda.
Dhinaca dowladda Soomaaliya khasaaraha soo gaaray oo aan wax ka weydiinayey ayuu sheegay ?Hal Askari ayaa dhintay dhaawacna waa jiraa, balse khasaaraha ugu badan ayaan gaarsiinay Al-shabaab.? Ayuu yiri Maxamed Macalin.
Amaanka magaalada Xudur ayaa ah mid halis badan deris la ah maadama ciidamo ka tirsan kooxda Al-shabaab ay joogaan meelo ku dhow degmada iyagoo inta badan soo qaada dagaal khasaare gaysta, gudoomiyaha ayaa sheegay in qorshaha u degsan uu yahay inay gobolka ka sifeeyaan kooxda.
DHEGEYSO: Adna Aways oo daljir ka tirsan ayaa? waraystay gudoomiyaha Bakool Maxamed Macalin